Faah-faahin dab bur-buriyey xaafiisyo muhiim ah oo ka kacay Bangiga Dhexe, Sawirro – Hornafrik Media Network
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dab xalay ka kacay xarunta Bangiga Dhexe ee Sil-silaweyne oo ku taalla degmada Xamar-weyne ee gobolka Banaadir.
Dabkan oo ahaa mid xoog leh ayaa waxa uu saameeyey xafiisyo ka tirsan xarunta Bangiga Dhexe, sida ay xaqiijiyeen mas’uuliyiin goobta tegay, dabka ayaa gabi ahaanba burburiyey laba xaafiis oo muhiim ah sida aan xogta ku heleyno.
Labada xaafiis mid waxaa la sheegay inay yeelaan qalab u badnaa computrro oo muhiim u ahaa Bangiga, halka xaafiiska kale ee dabkaas ku bas beelay ay ku keydsanaayeen liisaskii lagu diiwaan geliyey shaqaalaha dowladda iyo ciidanka qaranka, kuwaas oo ahaa tira koobkii ugu dambeeyey ee la sameeyey sida ay noo xaqiijiyeen mas’uuliyiinta qaar.
Illa hadda macadda waxa la dhiyey dabkaas, balse warar ayaa sheegaya in dabka uu ka dhashay koronto, iyadoona markii dambe lagu guuleystay in la demiyo, kadib markii uu halkaas gaaray gadiidka gurmad deg-degga ee maamulka gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish oo ka mid ahaa mas’uuliyiintii gaartay goobta intii lagu howlanaa deminta dabkaas ayaa warbaahinta la hadlay, waxuuna ka warbixiyey sida ay uga howlgaleen deminta dabkaas iyo khasaaraha ka dhashay.
Cumar Filish ayaa sheegay dabku uusan geysan khasaare sidaa u weyn, isla markaana si deg-deg ah looga hor tegay inuu ku sii faafo xafiisyada kale ee muhiimka ah, isagoona shaqaalaha gurmadka deg-degga ee dab damiska gobolka Banaadir uga mahad celiyey dhiiranaantooda iyo sida ay heeganka ugu jiraan xilli la kala hoyday.
Ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho, inay guryahooda oo dhigtaan haamaha Ogsajiinka, oo looga hortagi karo inuu dabku faafo.
Dab Damis. 630×420 1
Dab Damis2 630×420 1
Fb Img 1580186732523
IMF oo war warbixin ka soo saartay guul ay Soomaaliya ka gaartay nidaamka deyn cafinta